यो लामो महिलाहरु को लागि गरिएको छ एक आश्चर्य यस अस्तित्व छ मानिसहरूको प्रकार एक रूप "sissy।" र हालै यो वर्गीकरण अन्तर्गत पर्न कि व्यक्तिहरूको बलियो सेक्स, यो थप र थप बन्नेछ। यो किन हो, सीधै कुनै एक सक्छन्, तर के Infantilism आफ्नो छोराको दोष मा आफ्नो आमा व्याख्या - यो एक indisputable तथ्य छ। विशेष गरी कोमल "उदाहरणहरू" sonnies एक पति नगर्ने mummies, nurtured। त्यसैले तिनीहरू "शिफ्ट" बच्चाहरु को लागि मेरो सबै प्रेम र अत्यधिक हेरविचार।
यी महिलाहरु चिकन र अन्डा जस्तै सन्तान जन्माएर थकित छन्: फिड, पानी, पाल्तु जनावर शर्ट, अंडरवियर र मोजे धुन, सुत्न र एक लोरी गाउन गर्न राखे। र यो बच्चा लामो देखि पाँच को उमेर देखि देखा र पूर्ण यौन परिपक्व, स्वतन्त्र मानिस बन्नुभयो छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, सबै syusyukanem संग मिश्रित छ। तर यो त आमा जताततै यो नियन्त्रण यदि साँच्चै स्वतन्त्र छ? "मित्र बनाउन छैन क्रममा, त्यहाँ जाने नगर्नुहोस्, यो छैन ..." र अक्सर सिक्न जहाँ उनको सानो छोरा र कसलाई विवाह गर्न आमा निर्णय गर्ने बिन्दु गर्न आउँछ। र चाहे त्यो विवाह गर्न छ ...
एक sissy र प्राप्त आफ्नै परिवारको सोच्छ भने पनि, बाँकी को आमा उहाँले अझै पनि गर्दैनन्। यसलाई आफ्नो शिक्षा, केटी छैन विवाह विपरीत छ, विशेष गरी यदि त्यो उसलाई चुनिएको थियो। आखिर, कि कसरी हुन सक्छ? त्यो, उनको केटा खडा खडा रात सुतिरहेको छैन, र यहाँ आउन केही "coquette" nurtured र holila र धन टाढा लगे। तर आफ्नो बुढेसकालमा पानी एक गिलास के? र सामान्य मा, उनको छोरा प्रेम गर्दैन, त्यसैले, यो शर्ट छैन छ स्ट्रोक रूपमा भाँडा माझ्छिन् गर्ने छोरी, विरुद्ध लुकेको (र कहिलेकाहीं खुला) युद्ध सुरु र। किनभने साँच्चै मेरो आमा प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो बिस्तारै आफ्नो अधिक बढेको बच्चा विपरीत पत्नी समायोजन गर्न थाल्छ।
मानिस, पाठ्यक्रम, पहिलो प्रतिरोध मा, तर चाँडै आमा र तुलना कसरी सही थियो discovers आफ्नै पत्नी को आमा संग लामो लिन प्रतीक्षा गर्नुभयो। जसको पति एक महिला - एक sissy, या त एक मुट्ठी लिन छ र-व्यवस्था राम्रो हुनेछ (छ, सिद्धान्त, यो असम्भव एक जोडीलाई को दृश्य को बिन्दु हो) वा सम्बन्धविच्छेद लागि फाइल।
दोस्रो, दुर्भाग्य, यो प्राय कुनै पनि समझदार महिला सबै आफ्नो एक वयस्क मानिस, पनि घरको मद्दत उल्लेख छैन, फ्रिज मा खाना पाउन सक्दैन गर्ने हेरचाह जीवन हेरचाह गर्न चाहनुहुन्छ किनभने हुन्छ?
त्यसैले, तपाईं एक मानिस आफ्नो जीवन बाँध्न चाहँदैनन् भने जसको लागि शब्द आमा - अन्तिम सत्य, यो आवश्यक पनि zavyazhutsya गम्भीर सम्बन्ध अघि तत्संबंधी पहिचान गर्न सिक्न छ। तिनीहरूले अब सक्नुहुन्छ किनभने एक समय पछि - तपाईं यो कहिलेकाहीं प्रत्यक्ष, के गर्न सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीं शिशु मानिसहरू आफूलाई रूपमा विश्वसनीय र विश्वस्त रुप बदल्नु। : एक sissy, उहाँले निम्न हुनेछ संकेत - यदि तपाईंको नयाँ मित्र त
उहाँले पनि अक्सर र ठूलो कोमल (आदि, आमा, mamulenku, आमा) आफ्नो आमा गर्न उल्लेख र अपमान र पनि आफ्नो भन्दा निर्दोष प्रश्न को आमा संग यसको सम्बन्ध विषयमा रिसाए लाग्न सक्छ।
नियमित आफ्नो आमा कल र जहाँ यो कसको र कुन समयमा घर आउन संग, तपाईं बताउँछ।
यो त, अनुमोदन को मामला मा, अधिक तपाईं एक समय खर्च छैन, सकेसम्म गर्न "शो" आफ्नो आमा खोज्ने।
लुगा र उहाँको आमा धेरै किनभने स्वाद नभएको कंघी।
मेरो आमा बुना वा खरिद किनभने, केही मोजा, reindeer (र तिनीहरूले स्कूल दिन देखि संरक्षित छन् भने पनि तिनीहरूलाई लगाएका,) संग स्कार्फ र स्वेटर Cherishes।
उहाँले विवाह पछि मात्र यो भने उनको विवाह भनेर आफ्नो प्रिय अभिभावक को कि जस्तै तरिका मा नै समारोह प्रदर्शन गर्नेछन् केटी एउटा अल्टीमेटम उद्धार गर्न सक्षम छ।
यो त्यो आमा जस्तै चाव यसलाई हेरचाह गर्ने मात्र केटी पाउनुपर्ने एक प्राथमिकताओं निश्चित छ किनकी, तिमी जीत वस्तुतः कुनै प्रयास बनाउन गर्दैन। तपाईं छैन भने, त्यसपछि यसलाई खराब पत्नी हुनेछ र यसैले (राम्रो केटाहरू घरमा खाने भइरहेको) रेस्टुरेन्ट एउटा यात्रा योग्य छैन, फूल reindeer संग स्वेटर को रूप मा (र उपहार (तिनीहरूले मार्च 8 मा मात्र आमा दिइएको) आफ्नो प्रस्तुत मात्र आमा )।
रोमान्टिक गर्मी: किन सजिलो छ वर्ष को उत्तेजक समय प्रेम पर्नु गर्न?
शिकोकू को जापानी द्वीप: पृथ्वी shrines र प्राकृतिक
साधारण चिसो कारण फरक छ, त्यसैले यो सम्भव छ जो परिस्थितिमा थाहा महत्त्वपूर्ण छ र कसरी घर मा नाक धुन
आलु कसरी बनाउने सबै चीजहरू मूल्यवान र उपयोगी राख्न को लागी?